Lesoka fiarovana lehibe hita tao Slack | Vaovao momba ny gadget
Tamin'ity indray mitoraka ity dia Frans Rosen ilay tompon'andraikitra fampitandremana ny vondrom-piarahamonina momba ny fanitsakitsahana fiarovana vaovao, tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny iray amin'ireo rindranasa ampiasain'ny karazan'orinasa rehetra amin'ny serasera anatiny toy ny hiahotrahoranareo.
Araka ny fampahalalana nomen'ny mpikaroka momba ny fiarovana Detectify, Slack dia toa manana fahalemena lehibe izay ahafahan'ny mpampiasa manana fahalalana ampy fidirana feno amin'ny kaonty sy hafatra nosoratan'ny mpampiasa hafa ny sehatra.
Slack dia manamboatra lesoka fiarovana matotra eo amin'ny sehatra misy azy ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Raha vantany vao hita ilay bibikely, dia nifandray tamin'ny mpitarika ny Slack i Rosén mba hampita izany, zavatra izay nisy fiatraikany lehibe nanomboka teo afaka andro vitsivitsy dia nopetahana ilay bibikely amin'ny fomba izay tsy ahazoana mangalatra intsony ny mari-pamantarana fanamarinan'ny mpampiasa iray, ka azonao atao ny maka tahaka azy io avy eo.
Ho an'ireo izay tsy mahalala, ireo mari-pamantarana novokarin'i Slack dia ampiasaina amin'ny bots, script na programa hafa hampidirina miaraka amin'i Slack tenany. Tsy ilaina intsony ny milaza, raha afaka mihazona an'ity angona ity ianao dia afaka manana fidirana feno amin'ny kaontinao, ekipa ary hafatrao izay nalefanao na voarainao.
Raha ny fahitana azy sy araka ny navoaka, ity token fanamarinana ity dia azo angalarina rehefa manokatra pejy maloto iray noho ny lesoka ao amin'ilay kinova ho an'ny mpitety ny Slack platform mihitsy. Toa izany, ary raha ny fanehoan-kevitra Rosén dia afaka nahatsikaritra io tsy fahombiazana io raha nanadihady ny bibikely izay nahantona ny antso tamin'ny olon-kafa..
Ho antsipiriany farany, lazao aminao fa rehefa nampita an'io tsy fahombiazana io tamin'ny Slack ianao dia tsy vitan'ny hoe afaka nihetsika haingana ilay sehatra mba hamahana ilay olana, fa nahazo valisoa koa 3.000 euros ho an'i Rosén tamin'ny nahitany ny tsy fahombiazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Fahalemena lehibe iray hita tany Slack
Ireo no lalao maimaim-poana amin'ny volana martsa amin'ny PlayStation Plus